ထားဝယ်မုန့်တီ (ခေါ်) ထားဝယ်ရိုးရာ မုန့်လတ်သုပ် | MyFood Myanmar
ခေါက်ဆွဲ - Noodle Dishes | Recipes | မုန့်ဟင်းခါး - Mone Hin Gha
ထားဝယ်မုန့်တီ (ခေါ်) ထားဝယ်ရိုးရာ မုန့်လတ်သုပ်
ထားဝယ်ဒေသမှာတော့ ထားဝယ်ရိုးရာ မုန့်လတ်သုပ်ကို အထူးသဖြင့် နေမကောင်းဖြစ်ပြီး နာလန်ထစလူတွေက ဆိုင်ကိုပြေးပြီး အားရပါးရ စားကြတာလေ၊ စားပြီးတာနဲ. ချွေးတွေထွက်ပြီး လန်းဆန်းနေကောင်း သွားကြပါတယ်။ ရှူးရှူးရှဲရှဲ နှင့် အရသာ အရမ်းရှိပါတယ်။
ငါးကျွှဲရင် (သို့) ငါးကြင်းအကောင်ကြီး
မုခွေယား (ထားဝယ် စာကလေးခွေ) သို့ စာကလေးခွေ
ထားဝယ်ရိုးရာ မုန့်လတ်သုပ် လုပ်နည်းက ငါးကျွဲရင်လို ငါးမျိုးနဲ့ ချက်တယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ အသားများတဲ့ ငါးကြင်း အကောင်ကြီးသားနဲ့ ချက်ကြတယ်။
ငါးကြင်းခုတ်သား များများကို “ ပအုန်းရည်” နဲ့ ပြုတ်ပါတယ် ။ ပအုန်းရည် ဆိုတာက ထန်းရည်ကို အချဉ်ဖောက်ထားတာပါ။
မုန့်လတ်သုပ် ချက်ပြုရာတွင်လည်း ငါးကို ပအုန်းရည် နဲ့ ပြုတ်ပြီး ငံပြာရည် နဲနဲ ထည့်တယ်။ ထားဝယ်မှာက ငါးပိထည့်တာများတယ်။
ငါးပြုတ်ရည်ဆူရင် ငါးတွေကို ဆယ်ပြီး အရိုးများ ဖယ်ရှားရ်ျ အသားအတုံး ကြီးကြီးလေးတွေ ဖဲ့ပါတယ် ။( ကြေရင် မကြိုက်လို.ပါ ။ )
ဖဲ့ ပြီးသားငါးတွေ ပြုတ်ရည်ထဲ ထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီဥ လေးငါးစိတ် စိတ်ထားတာတွေ ခပ်များများထည့်ပါတယ်။
ဟင်းခတ်မှုန့် ထည့်ပြီးရင် ဟင်းရည်အနဲ့က မွှေးကြိုင်ပြီး အရသာ အရမ်းရှိနေပါပြီ။
စားမယ်ဆိုတော့မှ ပန်းကန်ထဲ မုန့်ဖတ် သင့်ရုံထည့်၊ မုန့်ဖတ်ဖြူဖြူပေါ်မှာ ငံပြာရည် နဲ့ အချိုမှုန့် နဲနဲထည့် ၊ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးပြီး ရေဆေးထားတာ နဲနဲထည့် ၊ ငရုပ်သီးအစိမ်း သေးသေးလေးတွေ ဆစ်ထားတာကို လိုသလောက်ထည့်ပြီး “မုခွေယား(ထားဝယ်စာကလေးခွေ) သို. စာကလေးခွေ နှစ်ခုလောက် ခြေပြီးထည့်ပါ ။
ပြီးမှမုန်.ဖတ်ပေါ်မှာ ခုနက ပြုတ်ပြီး မီဖို ပေါ်တင်ထားတဲ့ မုန့်လတ်သုပ် ဟင်းရည်ကို ဆမ်းထည့်ပါ။ ငရုပ်သီး အကျက်မှုန်.တော့ ကြိူက်သလို ထည့်နိုင်ပါတယ် ။
အချဉ်ကြိူက်ရင် သံပုရာသီးလေးညစ် ထည့်စားနိုင်ပါတယ် ။
*ပအုန်းရည် ဆိုတာက ထန်းရည်ကို အချဉ်ဖောက် ထားတာပါ။ ပအုန်းရည်က ငါးပိလက်သုပ် လုပ်စားရင်လည်း သံပုရာရည်၊ ရှောက်ရည်အစား ထည့်လို့ရပါတယ်။ မွှေးတေးတေး အနံ့လေးနဲ့ ပိုစားလို့ ကောင်းပါတယ်။
Credit: ထားဝယ်စာပေ နှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ.
ဘူးသီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူးများ